समाचार Archives - Page 132 of 287 - Enepal Serofero
आज आमाको मुख हेर्ने दिन: वृद्धाश्रममा आँसु बगाउँदै आमा, भन्छिन्- ‘छोरीले एउटा कोठा दिए भत्ता खाएर बाँच्थें’ पूरा हेर्नुहोसपुरा बिवरण हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला👇👇
काठमाडौं, ३ वैशाख । बिहान १० बजे पशुपतिस्थित वृद्धाश्रममा पुग्दा खाना खाने समय भएको थियो । आश्रममा रहेका सबै वृद्धवृद्धाहरू खाना खाँदै थिए । खाना खान नसक्नेलाई त्यहाँ आउने स्वयंसेवकहरूले खाना खुवाइदिँदै थिए । आश्रममा खाना नखाइ एक वृद्धा टोलाइरहेकी थिइन् । ‘आमा आरामै हुनुहुन्छ ? खाना खानुभएको छैन ?’ ‘हजुर आरामै छु नानी ।’ टोलाइरहेकी उनले जवाफ दिइन्, ‘राम्रोसँग खानाखान सक्दिनँ, एकछिनमा दूध खान्छु, ल्याइदिसकेका छैनन् ।’आज आमाको मुख हेर्ने दिन । आश्रममा कहिलेकाहीँ भेट्न आउने गरेकी छोरी आज पनि आउँछिन्, कि भनेर उनी बाटो हेर्दै टोलाइरहेकी थिइन् । एकछोरा र एक छोरीकी ७० वर्षीया आमा धनमाया जंघमले १० वर्षदेखि वृद्धाश्रममा बस्दै आएको बताइन् । छोराछोरीको बिहेपछि आफूले काम गर्न सक्दासम्म उनी घरमै बसिन् । जब आफूले काम गर्न नसक्ने भइन्, तब उनी वृद्धाश्रममा आइन् । परिवारमा दुःख देखेर आफूले बुढेसक
काठमाडौं, ३ वैशाख- साउदी अरेबियाको ‘अल औदा’ कम्पनीमा मजदूरी गर्न गएका १७ नेपाली कामदार विगत आठ महिनादेखि अलपत्र परेका छन् ।काठमाडौँस्थित ‘मसरिक इन्टरनेशनल ओभरसिज’मार्फत करीब तीन वर्षअघि उनीहरू साउदी पुगेका थिए । कम्पनी र कामदारबीच भएको दुईवर्षे श्रम सम्झौता सकिए पनि कम्पनीले पासपोर्ट नदिएपछि उनीहरू घर फर्किन पाएका छैनन् । विगत ८ महिनादेखि उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । आफूलाई पठाउने म्यानपावर सञ्चालकलाई उद्धारका लागि पहल गर्न बारम्बार फोन गर्दा सञ्चालकले एयरपोर्टबाटै गायब बनाइदिने धम्की दिएको वैदेशिक रोजगार विभागमा भेटिएका पीडित सोनाम लामाका दाइ ज्ञानबहादुर लामाले लोकान्तरलाई बताए । उनका अनुसार भाइ सोनाम अन्य १६ जनासंगै २०७२ सालको जेठमा मजदूरीका लागि साउदी पुगेका थिए । दुईवर्षे सम्झौता अवधिभित्र पनि उनीहरूले नेपालबाट तोकेर पठाएको तलब र अन्य सुविधा पाएका थिएनन् । सम्झौता अवधि
सुर्खेत, सुर्खेतमा युवती हत्याको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिका–२, सालकोटकी २१ वर्षीया गीता चपाईको हत्याको अभियोगमा फरार रहेका सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८, कुनाथरीका १९ वर्षीय सुवास बोहरा पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो काठमाडौँको संयुक्त अनुसन्धानका क्रममा सुवासलाई काभ्रेपलाञ्चोकबाट पक्राउ गरिएको हो । हत्याको बारेमा प्रहरीले आइतबार यहाँ सार्वजनिक गरेको छ । फोन र फेसबुकको विस्तृत विवरणका आधारमा सुवासलाई काभ्रेपलाञ्चोकवाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले बताउनुभयो । चपाईको हत्या गरेको भोलिपल्ट सुवास सुर्खेतबाट भागेर काभ्रेपलाञ्चोक गएको प्रहरी प्रमुख चतुर्वेदीले बताउनुभयो । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नुअघि सुवास काभे्रपलाञ्चोक जिल्लाको भुम्ती गाउँपालिका–४, पोखरीच
बालुवाटारबाट बामपन्थीलाई आयो खुसीको खबर, एकता कहिले ?
काठमाडौं, ३ वैशाख । बामपन्थी एकीकरणको विषयमा अन्योलता छाएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट बामपन्थीका लागि खुशीको खबर आएको छ । सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेबाट सिधै बालुवाटार पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ओलीबीच अढाई घन्टा वार्ता भएपछि एकीकरण ९ वैशाखमै गर्नका लागि एकता संयोजन समितिको वैठक मंगलबार विहान बस्ने निर्णय भएको छ । प्रचण्ड र ओलीबीच एकीकरणका प्राविधिक कुरामा सहमति भएपछि संयोजन समितिमा कार्यदलले राखेको एकीकरणका प्रस्तावमा छलफल हुनेछ । प्रचण्ड–ओली छलफलमा दुवै पार्टीको सम्मानजनक एकतामा सहमति भएको छ । संख्या र पदमा भन्दा पनि दुई अध्यक्षको कार्याधिकारका विषयमा कुरा अड्कीएको थियो । त्यसको समाधानका लागि कार्यदलले दुवै अध्यक्षलाई वरिष्ठ हुने व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षतालाई प्राथमिकता प्रस्तावमा तोकेको छ । ‘भोली बस्ने बैठकमा
शीतलपाटी । “महिनावारी भएका किशोरीले मात्र आवश्यकताअनुसार प्याड झिक्नुहोला । कति पिस लाने हो, रजिष्टरमा जनाइदिनुहोला ।” तपाईंलाई लाग्न सक्छ, ती वाक्यांश स्वास्थ्य संस्थामा टाँस गरिएको सूचना होला । होइन, अहिले सिन्धुलीका उच्च माध्यमिक विद्यालयका पुस्तकालयमा छिर्नेबित्तिकै ती वाक्यांशले सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ । “किशोरी छात्राले पढाइलाई विशेषतः हाजिरीमा किन निरन्तता दिन सक्दैनन् भनेर खोजी गर्दा महिनावारी पनि एक कारण रहेछ, महिनावारी हुँदा पढ्न जाँदा साथीले के भन्छन्, तल्लो पेट दुखिरहने, कहिलेकाहीँ त बढी रक्तस्रावसमेत हुने भन्दै उनीहरु विद्यालय नआउने रहेछन् ।” दीर्धप्रदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय शीतलपाटीका स्वास्थ्य विषयका शिक्षक लोकबहादुर श्रेष्ठ विगतका समस्या सुनाउनुहुन्छ । “अभिभावक भेला, व्यवस्थापन समितिका बैठक एवं विद्यालयको आन्तरिक छलफलमा पुस्तकालयको एउटा दराजमा उनीहरु छात्राको
काठमाडौंमै भेटियो अर्धनग्न अवस्थामा युवतीको शव, आठजना पक्राउ
काठमाडौं, ३ वैशाख । काठमाडौंको बसुन्धारास्थित सुकुम्बासी टोलमा एक युवतीको हत्या भएको छ । मृतक युवतीको सनाखत हुन सकेको छैन । उनको अनुहार नचिने अवस्थामा रहेको छ । आइतबार राति करिब करिब १० बजेतिर युवतीको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । लगाएको कपडा च्यातेर अर्धनग्न अवस्थामा सुकुम्बासी बस्तीको करिडोरमा फालेको अवस्थामा युवतीको शव फेला परेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । मृतक युवतीको टाउकोमा धारिलो हतियारले हानेर रगताम्मे भएको अवस्थामा फेला परेको छ । मृतक युवतीको शवलाई पोष्टमास्टर्मका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ । युवती हत्याको अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । from dainiknepal.com
श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएर आफ्नै छोरीसँग विहे, श्रीमती हुुँदाहुँदै छोरीसँग अवैध सम्बन्ध
काठमाडौं । एउटा बाबुका लागि आफूले जन्म दिएको सन्तान प्राण भन्दा प्यारो हुन्छ । छोरीका लागि आफ्नो बाबु अभिभावक मात्र नभई भगवान सरह हुन्छन् । यस्तै बाबुका लागि छोरी घरकी लक्ष्मी जस्तै मानिन्छ । नेपाली समाजमा बाबु–छोरीको सम्बन्ध पवित्र मानिन्छ । तर, अमेरिकामा एउटा यस्तो घटना बाहिरिएको छ, जुन सुन्दा पनि सबैको होश हवास उठ्छ । अमेरिकाका एक बाबुले घरकी श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएर आफ्नै छोरीलाई विहे गरेका छन् । अमेरिकाको कनेक्टिकटस्थित न्यू मिलफोर्ड टाउनमा स्टीवन प्लाडले आफ्नी श्रीमतीलाई तब डिभोर्स दिए जब उनकी १९ वर्षे छोरी (केटी नाम गरेकी) गर्भवती थिइन् । श्रीमती हुुँदाहुँदै छोरीसँग अवैध सम्बन्ध राखेका स्टिवनले गर्भवती भएपछि श्रीमतीलाई डिभोर्स दिए र छोरी केटीसँग विहे गरी वैधानिक रुपमै श्रीमती बनाए । श्रीमती नहुुँदा उनी छोरीलाई श्रीमतीकै रुपमा हेर्थे र सम्बन्ध राख्दै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्
सचिवका दुईवटा गाडी, चालकै नराखी चालकको तलब आफैँ बुझ्छन्
काठमाडौं। संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले २ वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले प्रयोग गरेका गाडी एउटा नयाँ र अर्को पाँच वर्ष पुरानो छ । सुवेदीले चालकको नाममा समेत रकम बुझ्दै आएका छन्, जब कि चालक भने राखेका छैनन् । स्रोतका अनुसार पुरानो गाडीको मर्मत खर्च बढी पाइने भएकाले उच्च ओहोदाका कर्मचारी पुरानो र नयाँ दुवै गाडी लिन्छन् । सचिवालयले पुरानो गाडीका लागि मर्मत खर्च बढी दिन्छ । सचिव सुवेदीले सवारीचालकको नाममा आउने पारिश्रमिक, मोबिल, मर्मत खर्च र इन्धनबापतको रकम आफैले बुझ्दै आएका छन् । संसद्का कर्मचारीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेका छन् । ऐनविपरीत संसद्का सचिव, उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीले गाडीको सुविधा उपभोग गरेका हुन् । कसैले एकभन्दा बढी गाडी लिएर त कसैले आवश्यकताविना गाडी चढेर दुरुपयोग गरेका छन् । गाडीको इन्धनमा समेत अनियमितता भएको छ । ऐनअनुसार संसद्का पदाधिकारी
अमेरिका र रुसको चेपुवामा परेको सिरिया संकटले बढायो ध्रुविकरण
काठमाडौं । ओरालो लागेको मृगलाई बाछोले पनि खेद्छ भने झैं भएको छ सिरियामा । अरुको भरमा शक्ति सञ्चित गर्ने राष्ट्रपति बसर अल असदको सोचविरुद्ध १३ राष्ट्रले सिरियामा युद्ध छेडेका छन् । रुस र चीनको सहानुभूति भएपनि अन्य ११ देश सिरियालाई ध्वस्त पार्ने प्रयासमा छन् । शनिवार अमेरिकाले सुरु गरेको हवाई हमलाले सिरियालाई थप कुरुप बनाइरहँदा शक्तिशाली देश ध्रुविकृत बन्नेक्रम जारी छ । अमेरिका र रुसबीचको टकरावले निम्त्याएको सिरियाको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा जारी युद्धमा २० वटा देश प्रत्यक्ष– अप्रत्यक्ष संलग्न छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गर्दै भइरहेको हमलाले दमास्कस, गुटा र डुमा क्षेत्र जर्जर बन्दै गएको छ । शुक्रबार मध्यराति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आक्रमण गर्ने घोषणा गरेको केही घण्टा नबित्दै सिरियामा हमला हुँदा धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् । अर्को शक्तिशाली राष्ट्र रुस
वर्षाले छाडेको निकिताले समाइन्
काठमाडौं । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले हात झिकेको फिल्ममा मिस नेपाल २०१७ की विजेता निकिता चण्डक अनुबन्धित भएकी छन् । निकिताले आइतबार फिल्म ‘रानीमहल’को मुख्य अभिनेत्रीका लागि सम्झौता गरेकी छन् । अभिनेत्री सिवाकोटीले फिल्मसँग सम्झौता तोडेपछि निर्माण युनिटले निकितालाई अनुबन्धित गरेको हो । मिस नेपाल २०१८ घोषणा भएपछि निकिता फिल्ममा अनुबन्ध हुन तयार भइन् । हिमाल न्यौपानेको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्मबाट निकितासँग रोमान्स गर्दै आशिष अधिकारीले अभिनयमा डेब्यू गर्दैछन् । फिल्ममा नीर शाह, रश्मी भट्ट, बिएस राना, साहिल श्रेष्ठ, मानस्वी खरेल लिड रोलमा हुनेछन् ।
Previous 1 … 131 132 133 … 287 Next